FAHA 45 TAONAN’NY FJKM : NENTINA AM-BAVAKA I NENY – MyDago.com aime Madagascar
FAHA 45 TAONAN’NY FJKM : NENTINA AM-BAVAKA I NENY
« Ezaho ny fiantsoana, fa aza atao malemy » Isai 58 :1a io no lohahevitra nosafidiana amin’ny fankalazana ny faha 45 taonan’ny Fjkm. Androany 30 Jona 2013 teny amin’ny Kolejy Teolojika Ivato nanomboka tamin’ny 10 ora sy sasany maraina no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana fanokafana izay faha 45 taonan’ny Fjkm izany. Ambohipihaonan’ireo mpino avy amin’ny Fjkm araka izany teny an-toerana. Tonga nanatrika izany ny vadin’ny filoha mpanampy ny Fjkm Ramatoa Lalao Ravalomanana. Nitarika ny fotoana ny mpitandrina Rasolomanana Néhémie filohan’ny komity fankalazana ny faha 45 taonan’ny Fjkm. Namaky ny tenin’Andriamanitra tamin’izany ny filohan’ny synodaly, ka ny voalaza tao amin’ny Isaia 41 :14-20, Marka 13 :33-37, ary ny Apokalipsy 20 : 1-6 ireo no novakiana tamin’izany. Nitory ny tenin’Andriamanitra ny mpitandrina Rasendrahasina Lala filohan’ny biraon’ny mpiandraikitra foibe Fjkm. Ny lohahevitra izay nosafidiana « ezaho ny fiantsoana, fa aza atao malemy » mandritra ny fankalazana ihany no nanomezany hafatra tamin’izany. Nambarany fa teny manome baiko, ary teny maniraka ny mpaminany io teny io. Ny zanak’Israely izay babo tany an’ady hoy izy dia nisy fahakiviana. Fantatry ny Tompo izany ka naniraka mpaminany izy ary niantso amin’ny feo avo ny zanak’Israely. Hanambara ny tenin’Andriamanitra ary hamotsipotsitra ny zavatra tsy mety eto amin’ny firenena ny mpaminany.Aza matahotra fa ataovy mafy ny feo.Nisy ny vavaka fiderana sy fangatahana ka tamin’izany no nitrotroana am-bavaka an-dRamatoa Lalao Ravalomanana amin’ny fikasana hitondra ny firenena.Marihina fa tsy nahitana kandidà hafa nanatrika na dia betsaka ireo kandidà manaraka ny finoana Protestanta afa-tsy ny kandidà Lalao Ravalomanana izay nahatsapa ny lanjan’izany finoana izany ary nanome voninahitra ny fotoam-pankalazana. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa ny Alahady 18 Aogositra 2013 izao no ivon’ny fankalazana ny faha 45 taonan’ny Fjkm any Toamasina. Any Fianarantsoa kosa ny Alahady 3 Septambra 2013 no hanaovana ny famaranana. Tamin’io fotoana io ihany koa no nizarana ny loka ho an’ireo mpifaninana telo voalohany izay nahazo tamin’ny fifaninana nanao sary famantarana ny faha 45 taonan’ny Fjkm ary ny hira faneva. Taorian’ny fotoampivavahana dia maro ireo mpino izay nilahatra handray tànana an’I Neny. Tao anatin’ny endrika ravoravo sy miramirana tanteraka no nasetrin’I Neny izany.
BORIBORINTANY FAHA 3 SY FAHA 5 NANOLOTRA FANOMEZANA HO AN’NY MPIANATRA HANAO CEPE
FJKM : LANY 1 ER TOUR NY FILOHA RAVALOMANANA
NY FIANAKAVIANA RAVALOMANANA : NITOHY NY FITROTROANA AM-BAVAKA
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 juin 2013 30 juin 2013 Catégories Politique
8 pensées sur “FAHA 45 TAONAN’NY FJKM : NENTINA AM-BAVAKA I NENY”
manara-penitra dit :
30 juin 2013 à 16 h 06 min
Tsara be : « Hanambara ny tenin’Andriamanitra ary hamotsipotsitra ny zavatra tsy mety eto amin’ny firenena ny mpaminany.Aza matahotra fa ataovy mafy ny feo «
Manohina an’i Neny hatr@ farany ary miantso ny rehetra hanampy @ izany. Fahendrena ihany anefa eto ny mametraka itony arofanina itony dia ny hoe ity fivavahana ity dia tena basy atolotra ny fahavalo ary ho ampiasainy hanakianana ny mpifaninana LRa8, sy ny fitondrana ho entiny aoriana ao. Ka hoy aho hoe atsipy ny tady eny an-tandroky ny omby , atsy ny teny ao am-po no mahalala. Ary ny hendry ihany no hanarina.
Tadidio fa ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy hiditra @ famahezana ny lalàna sy ny toe-karana ary ny fifandraisana any @ ivelany izay tena tsy mila fivavahana avokoa. Ary indrindridra ny ady politika izay hatrehina fa ny Frantsay izay manabotry ny malagasy sy ny afrikana miteny frantsay dia sady maranitra no manam-bola ka tsy ny fivavahana mihitsy no entia miady aminy. Farany dia ilay tetika entin’ny frantsay hangejana an’i Madagasikara @ izao fotoana io no tokony hiadivana ny filalaovany ireo Mozambikanina, sy ny fanereny ny SADC hanaraka azy , Any no ady tokony hatrehina fa tsy ny any am-piangonana.
Ity fanatisme ity aloha dia tena toherika mafy mihitsy satria tongotra vakivaky, fa ilay fanatisme any @ ilany koa tsy ekena dia ny hoe ho foanana tanteraka ny fivavahana ary sakanana tsy hivavaka ny olona. Mboa ady tsy maitsy hatrehina koa izany ka aoka isika Malagasy mba ho hedry sy handinika fa ny nenina tsy ao aloha hananantra fa ao aoriana handatsa.
30 juin 2013 à 18 h 08 min
Tsara hamitinana an’azy angamba indrindra ho an’ny mpino dia izao:ny vavaka tsy arahan’asa dia zava-poana toy ny asa tsy arahana vavaka indrindra fa ny asa mila faharetana toy itony.Tsy ny finoana kristianina ihany eto no tiako resahina fa ny hafa koa izay mihevitra mankahery tena rehefa mivavaka.
« fa ny nenina tsy ao aloha hananantra fa ao aoriana handatsa. »
1 juillet 2013 à 18 h 18 min
Ho an’ny Zanak’i Dada fa ireto no tsy maintsy hatrehana sy fahavalo
1) Jean Marc Koumba sera immédiatement expulsé s’il continue d’assurer la garde rapprochée de Neny selon le Commandant de la Cirgn. (source TIM)
2)Quai d’Orsay : « La France appelle de nouveau Ravalomanana, Rajoelina et Ratsiraka à retirer leurs candidatures »	(source TNN)
Ka aoka tsy ho variana @ zavatra tsy handrosoana fa hiady am-pisainana sy hampahendrena itony fahavalo itony.
Misy garde corps tera -tany malagasy, tsy manana olana aminy papiers maro anie, hafaka miasa tsara
Hantenaina fa tsy hamadika amin’ny resaka vola ireo garde-corps lazainao ireo manara-penitra.Io mantsy izao no manodina olona.
Inona no tian’i Manarapenitra lazaina ???avy dia lazao???
manara-penitra @ famadiana sady mora VOAVIDY ???tsy adalana ireny
fa sady maharary no mahamenatra , nefa izany no fandehany dia tsy maintsy manao izao aloha.
Jereo fotsiny FIRIFIRY no namadika an’i Dada ary nahatonga izao fahavoazana izao???
Raha mba namadika ho @ TSARA moa maninona fa SAINGY INDRISY…………….!!!!!
Précédent Article précédent : MAHABO, AMBATOLAHY,MANAMBY, MIANDRIVAZO : MANDRESY i NENY, MANDRESY ISIKA
Suivant Article suivant : Matahotra an-dry « Marc » ny zandary